Dufcaddii-caqli-xumada ubadka Cunto karinta (BJC) Soo-saaraha | Yanrich
Guri > Wax soo wadaban > Qalabka jikada > Dufcaddii-caqli-galku udhiga karinta (BJC)
-Ga / -daDufcaddii waa layaab ku kari kara qaybta karinta (BJC) Waxaa loo isticmaalaa ka shaqeynta dhammaan noocyada jelly, marshmallow iyo cuntooyinka kale. Waa mashiinka makiinada makiinada. Dufcaddii Qaybta wax lagu karsado ee loo yaqaan 'paptwum' Intaas waxaa sii dheer, Qiyaasta Verwum-nooca nooca-ah waxay la jaan qaadayaan shuruudaha nadaafadda waana amaan ah, oo ah mid dhameystiran, muuqaal qurux badan, rakibaadda fudud iyo ku habboon, oo ku habboon, aamin ah oo la isku halleyn karo. Waxay ka dhigtaa faakiyuumka karinta nadaafadda nadaafadda iyo nabdoon.
Yinrich waa dufcad tayo sare leh oo ku kariye ah unugga karinta Qalabkayaga wax lagu karsado ee loo yaqaan 'pactum'
Qaybta qaboojiyaha faakiyuumka (BJC)
Nidaamka karinta ee caqliga-badan (BJC taxane) ayaa loogu talagalay dhammaan noocyada jellies iyo marshmallows oo ku saleysan gelatin, pectin, agar-agar, xanjo Carabi ah, isbadal iyo amylase sare. Dhamaan maraakiibta waxay ku yaalliin qaab is dul saaran.